2003 – Year – Channel Myanmar 6.4
Once UponaTime in Mexico (2003) Once UponaTime in Mexico (2003) IMDb - 6.4/10_____Rotten - 66% ဂဈတာအိတျကွီးလှယျထားတတျတဲ့ သှေးအေးလူသတျသမားတှအေကွောငျးကို မှတျမိကွဦးမယျထငျပါတယျ... မငျးသားကွီး Johnny Depp , Antonio Banderas တို့အပွငျ မငျးသမီးတှဖွေဈတဲ့ Salma Hayek နဲ့ Eva Mendes တို့လို နာမညျကြျောတှနေဲ့ရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာ ဒါရိုကျတာ Robert Rodriguez ရဲ့ Mexico Trilogy ထဲကနောကျဆုံးဇာတျကားပါ။ သူ့ရှကေ့ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ El Mariachi (1992) နဲ့ Desperado (1995) ဆိုတဲ့ ဇာတျကားတှကေလဲ ဒါရိုကျတာ Robert Rodriguez ရဲ့ နာမညျကြျောဇာတျကားတှပေါ။ El Mariachi (1992) ဇာတျကားဆိုရငျ Budget $7000 သာအကုနျအကခြံခဲ့ပွီး Box Office မှာ $2 ...
Hulk (2003) Hulk (2003) ကတော့ Hulk ရဲ့ Origin ကိုသီးသန့်ရိုက်ကူးထားဖြစ်ပြီး Solo သဘောမျိုး ထွက်ရှိထားတာပါ။MCU နဲ့ တိုက်ရိုက်ကြီး ဆက်နွယ်မှုမရှိပေမယ့် Hulk ရဲ့ Origin ကိုတော့ မြည်းစမ်းဖို့ ကြည့်သင့်ပါတယ်။ File size…(1.1 GB) and (660 MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….02:18:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by OWL
Lost in Translation (2003) Lost in Translation (2003)IMDb - 7.7/10_____Rotten - 95%Won 1 Oscar. Another 97 wins & 130 nominationsLost in Translation (2003) အမေီ၊ ဘာဘီနဲ့ ဒစေီ ဆိုတဲ့ မိနျးကလေး ၃ ယောကျစကားပွောနတေယျပဲဆိုပါစို့။ အမေီက ဒစေီကို အရမျးလှတဲ့အကွောငျးပွောတယျ။ ဒစေီက အဲ့ဒါကို အမေီ သူ့ကိုခဈြလို့ပွောတယျလို့ အဓိပ်ပါယျကောကျတယျ။ ကွားက ဘာဘီကတော့ အရှဲ့တိုကျပွောတယျလို့ အဓိပ်ပါယျကောကျတယျ။ တကယျတမျးတော့ အမေီဟာ ဒစေီ့လိုဖွဈခငျြတာကွောငျ့ ပွောတာဖွဈနပေါတယျ။ လူတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စကားပွောရငျးပဲဖွဈဖွဈ၊ အမူအရာတဈခုကို အကဲခတျရငျးပဲဖွဈဖွဈ အဓိပ်ပါယျကောကျတတျကွပါတယျ။ စကားတဈခှနျး၊ လုပျရပျတဈခုတညျးကို အဓိပ်ပါယျမြိုးစုံကောကျကွရငျး ကိုယျ့အဓိပ်ပါယျအတိုငျး ရှဆေ့ကျကွပါတယျ။ဒီရုပျရှငျဟာ နာမညျကဆြငျးနပွေီဖွဈတဲ့ ရုပျရှငျမငျးသားကွီးတဈယောကျနဲ့ ယောကျြားလဈြလြူရှုတာ ခံနရေတယျလို့ အဓိပ်ပါယျကောကျထားတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျအကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဘော့ဟားရဈလို့ချေါတဲ့ နာမညျကြျောမငျးသားကွီးဟာ ...
Shanghai Knights (2003) ဂျက်​ကီချန်း ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ဇာတ်​ကား​ကောင်းတစ်​ကားနဲ့မိတ်​ဆက်​​ပေးပါရ​စေShanghai Knights ဇာတ်​ကားဟာ 2003 ခုနှစ်​ကထွက်​ရှိထားတဲ့ တရုတ်​အ​မေရိကန်​အက်​ရှင်​ကားတစ်​ကားဖြစ်​ပါတယ်​Imdb rating 6.2/10ရရှိထားပြီး Jackie Chan....Owen Wilson...Donnie Yan...Aaron Taylor စတဲ့သရုပ်​​ဆောင်​ကြီး​တွေပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပါတယ်​ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်းက​တော့Chon Wang ဟာ အမိ​မြေတရုတ်​နိုင်​ငံကိုစွန့်​ခွာပြီး အ​မေရိကန်​နိုင်​ငံ Carson မြို့​လေးမှာ အရာရှိတစ်​​ယောက်​အဖြစ်​အသက်​​မွေးဝမ်း​ကျောင်းသူပါ....ဖခင်​ဖြစ်​သူက​တော့ တရုတ်​​တော်​၀င်​နန်းတွင်းတံဆိပ်​ကိုထိန်းသိမ်းရသူတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး သားလုပ်​သူကိုမနှစ်​မြို့သူတစ်​ဦးဖြစ်​ပါတယ်​....​တော်​လှန်​ပုန်​ကန်​မှု​တွေဖြစ်​တဲ့အချိန်​မှာ သူပုန်​​တွေက Chon Wang အ​ဖေ့ကိုသတ်​ပြီး တံဆိပ်​တုံးလုယူသွားခဲ့ပါတယ်​.....ဒီဖြစ်​ရပ်​​ကြောင့်​ Chon Wang ဟာ ပါတနာRoy O'Bannonနဲ့ပူး​ပေါင်းပြီး လူသတ်​သမား​တွေထွက်​​ပြေးရာလန်​ဒန်​ကို လိုက်​သွားပါ​တော့တယ်​.....​နောက်​ဆုံးမှာ အ​ဖေ့အတွက်​ကလဲ့စား​ချေနိုင်​မှာလား....တရားခံ​တွေက​ရောဘယ်​သူ​တွေလဲဆိုတာ ဆက်​လက်​ကြည့်​ရှုလိုက်​ပါ.... File Size : (950 MB) and (357 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 54min Format : Mp4 Genre :Action, Adventure, Comedy Subtitle : Myanmar ...
Agent Cody Banks (2003) Agent Cody Banks ဇာတျ​ကားဟာ ၂၀၀၃ ခုနှဈ​ကထှကျ​ရှိထားတဲ့ အ​မရေိကနျ​အကျ​ရှငျ​ဟာသကား​လေးဖွဈ​ပါတယျ​Imdb rating 5.1/10 ရရှိထားတဲ့ စီအိုငျ​​အလေူငယျ​စုံ​ထောကျ​ကား​လေးပါပါဝငျ​သရုပျ​​ဆောငျ​ထားသူ​တှကေ​တော့ Frankie Muniz,Hilary Duff,Angie Harmon တို့ဖွဈ​ပါတယျ​ဇာတျ​လမျးအကဉျြးက​တော့ သာမနျ ၁၅နှဈ​အရှယျ​ဆယျ​​ကြျော​သပျ​တဈ​ဦးဖွဈ​သူ ကိုဒီဘနျ့​ချ​မှာ လြို့ဝှကျ​ခကျြ​တဈ​ခုရှိပါတယျ​ ဒါက​တော့ သူဟာစီအိုငျ​​အလေူငယျ​​အေးဂငျြ့​တဈ​​ယောကျ​ပါဒီလိုနဲ့ သူ့အတှကျ​ပထမဦးဆုံးတာဝနျ​ထမျး​ဆောငျ​ဖို့အ​ကွောငျးဖနျ​လာပါ​တော့တယျ​ ဒါက​တော့ ERIS (အားရဈ​)လို့​ချေါတဲ့ လြို့ဝှကျ​အဖှဲ့အစညျးက ​ဒေါကျ​တာကှနျ​နာ ကို စုံစမျးဖို့နဲ့ သူတီထှငျ​ထားတဲ့ပစ်စညျးနမူနာကိုရယူဖို့ပါ.....​ကိုယျ့ကိုယျကိုေ​​ဆျာ​ကွညျ​ဘဲဖွဈ​​ကွောငျးကွှားဝါထားတဲ့ ကိုဒီတဈ​​ယောကျ​ ​ဒေါကျ​တာကှနျ​နာရဲ့သမီးဖွဈ​သူ နာတာလီကို ခဉျြးကပျ​ဖို့တာဝနျ​​ပေးခွငျးခံရပါ​တော့တယျ​.....ကိုဒီတဈ​​ယောကျ​ အိမျ​ကမိဘ​တှမေရိပျ​မိ​အောငျ​ဖုံးကှယျ​ရ....​ကြောငျးစာတဈ​ဖကျ​....တာဝနျ​တဈ​ဖကျ​နဲ့အတူ ဘယျ​လိုတိုငျ​ပတျ​မလဲဆိုတာ ကွညျ့​လိုကျ​ဦး​နျော​......File Size : (950 MB) and (330 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 42min Format : Mp4 Genre :Action, Adventure, Comedy Subtitle : Myanmar Subtitle ...
Running on Karma(2003) ဒီကားကို ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာလယ်က ဗီဒီယိုရုံလေးမှာ သွားကြည့်ခဲ့တာ...လူသန်ဗလကြီးက ငှက်မွေးလေးလိုပေါ့ပါးစွာခုန်ရင်း လူဆိုးတွေကို အားရပါးရ နွှာခဲ့တဲ့သူ့ကိုအရမ်းသဘောကျခဲ့တယ်....ဖြတ်ခနဲခုန်..ဒေါသတကြီး လော်ကာတွေကိုဝုန်းခနဲထိုးချ..မကောင်းမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုနှိမ်နင်း.အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးဆိုတော့နားမလည် ပါးမလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့အက်ရှင်ကားလို့ပဲမှတ်ချက်ချခဲ့တယ်...ကောင်းခန်းရောက်မှာတိပ်ခွေက မှုန်နေလို့ ပိုက်ဆံအသစ်လေးနဲ့ပွတ်ပြီး ဖိုက်ခန်းတွေကျော်သလိုဖြစ်တဲ့ရုံပိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကိုပြန်ရစ်ပေးပါလို့အသံဗြဲကြီးနဲ့အော်ခဲ့တာ...ခုမြန်မာစာတမ်းထိုးလေးနဲ့ကြည့်တော့ အက်ရှင်ကားဆိုတာထက်ပိုတယ်လို့ပြောလို့ရသလို ရသမြောက် အက်ရှင်ကားလို့လည်းပြောရမယ်ထင်တယ်. ဒီလိုကောင်းလို့လည်း Best Picture,Best Actor,Best Screen Play စတဲ့ဆု(၃)ဆုတောင်ရသွားပါတယ်...Best Actor ဆုရသွားတာကတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသား Andy Lau ဆိုတာတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ဘူး.... ကားဟောင်းလည်းဖြစ်လို့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေမပြောပြတော့ပါဘူး...... File Size…(855MB) and (355MB) Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…01:33:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…..Phyo Pyae Translated by Honest Abe
Running on Karma(2003)
A Guy Thing(2003) ယောင်္ကျားလေးအများစုဟာ အိမ်ထောင်ပြုခါနီးရင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ...သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ကဲကြတယ်..သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဟာ နောက်ပိုင်းငဲ့ကွက်ရမဲ့ဟာတွေ စီးပွားရှာရမှာတွေ စသောနှောင်ဖွဲ့မှုတွေမလွပ်လပ်မှုတွေရှိတော့မှာဖြစ်လို့ နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ကူညီ သောက်စားပျော်ပါးကြပေါ့ဗျာ...ဒီဇာတ်ကားထဲကကောင်လေးကလည်း အိမ်ထောင်ပြုခါနီးဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပါးသောက်စားပေါ့ဗျာ..နောက်ဆို တီဗွီချန်နယ်တောင်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးကိုး...ဒီလိုနဲ့သူဟာ မူးပြီးအိမ်ပြန်အိပ်တယ်...မနက်မိုးလင်းတော့ဖုန်းသံကြောင့်နိုးလာတယ်...မကြာခင်တော်ရတော့မယ့် ယောက္ခမလောင်းကြီးဖုန်းဆက်တာ..အဆင်ပြေလားဘာညာမေးပြီးသူ့သမီးလာမယ့်အကြောင်းပြောရင်းဖုန်းချသွားတယ်...ဇနီးလောင်းကိုကြိုဖို့ပြင်တော့ သူ့အိပ်ရာပေါ်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်......ညတုန်းကမူးပြီးကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်မိသွားတာ...ဒါကတော့ တကယ့်မတော်တဆကြီးဆိုပါတော့ဗျာ....အဲ့ဒီမှာ သတို့သားလောင်းဟာ တိုင်ပတ်တဲ့အဆင့်တင်မဟုတ်ဘူး တိုင်ပါလည်တော့တာပဲ...ကိုင်း အချစ်ဇာတ်မြူးလေးကိုခံစားလိုက်ပါဦးဗျို့File Size…(850MB) and (350MB) Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…01:40:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…..Phyo Pyae Translated by Sai Mg Mg
Jeepers Creepers II (2003) Jepper Creeper-2ဟာဆိုရင်​ 2003ခုနှစ်​မှာထွက်​ရှိခဲ့တဲ့ Horrorဇာတ်​ကားမျိုးဖြစ်​ပါတယ်​၊2001မှာ Jeeper Creeper-1ထွက်​ခဲ့တာ​အောင်​မြင်​ပြီးလူကြိုက်များခဲ့လို့ ၂ဖြစ်​တဲ့ဒီကားကိုဆက်​လက်​ရိုက်​ကူးခဲ့ပါတယ်​။ဇာတ်​လမ်း​လေးက​တော့ ပထမပိုင်းကအဆက်​လိုပဲ 23ကြိမ်​​မြောက်​​နွေဦးရာသီ​ရောက်​တိုင်း​​ရောက်​တိုင်း 23ရက်​ကြာ​အောင်​ လူသား​တွေကိုစားပစ်​တဲ့ ​EastNineလမ်းမကြီး​ပေါ်က သေမင်းတမန်​​တော်​တစ်​​ကောင်​ရှိပါတယ်​။အဲ့ဒီချိန်​မှာပဲ ​ကျောင်းဘတ်​စကတ်​​ဘောအသင်းတစ်​ခုဟာ EastNineလမ်းမ​ကြီး​ပေါ်က​နေဖြတ်​လာတဲ့အခါမှာ အဲ့​ဒီသေမင်းတမန်​​တော်​နဲ့ တည့်​တည့်​တိုးပါ​တော့တယ်​။သူက​ကျောင်းသား​တွေထဲက အ​ကြောက်​တရား​တွေထဲမှာအနံခံပြီးသူကြိုက်​တဲ့လူကို​ရွေးပြီးစားမလို့လုပ်​ပါတယ်​။အဲ့မှာတင်​ပဲ ​ကျောင်းသား​တွေဟာ သူ့ကို​ရွေးသွားတယ်​ငါ့ကိုမ​ရွေးဘူး၊ ဘယ်​သူ့​ကြောင့်​​တော့ငါတို့အ​သေမခံနိုင်​ဘူးစသဖြင့်​ အချင်းချင်းစိတ်​ဝမ်းကွဲကုန်​ကြပါတယ်​၊.....အဲ့လိုအဖြစ်​အပျက်​​လေး​တွေနဲ့ ​ကျောင်း​သား​တွေအားလုံး ​သေမင်းတမန်​​တော်​လက်​ထဲအလွတ်​​ပြေးနိုင်​ခဲ့ကြလား၊ဒါမှမဟုတ်​ ​သေမင်းတမန်​​တော်​က သူ​ရွေးချယ်​ထားတဲ့သူ​တွေကိုပဲအမိအရဖမ်းပြီး သ​တ်​စားနိုင်​ခဲ့လားဆိုတာ​တော့ဒီဇာတ်​လမ်း​လေးမှာစိတ်​ဝင်​စားဖွယ်​ရာကြည့်​ရှု့ရမှာပဲဖစ်​ပါတယ်​။Horrorကြိုက်​တဲ့ ပရိတ်​​တွေအတွက်​​တော့ လက်​မလွတ်​သင့်​တဲ့ဇာတ်​ကား​ကောင်းဖြစ်​ပါတယ်​။ File Size : (850 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 44min Format : Mp4 Genre :Horror Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p BluRay x264-DRONES Translated by Ye Yint Encoded by Thanhtike ...
School of Rock(2003) ဂီတကိုရူးသွပ်တဲ့လူတစ်ယောက်....သူ့မှာ တီးကွက်ခပ်လှလှ သီချင်းစာသား ခပ်ရွရွတွေရှိပေမယ့် ကံတရားကြောင့်ပဲလား သူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်ပဲလား မသိ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့နေနေသာ အိမ်လခတောင်ပေးဖို့အနိုင်နိုင်....ကံကဆက်ဆိုးချင်တော့ တီးဝိုင်းအဖွဲ့ကလည်း သူ့ကို ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်....လေလွင့်နေတဲ့သူဟာ အစားထိုးစာသင်ဖို့ကျောင်းဆရာအဖြစ်နဲ့လုပ်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်...ကျောင်းရောက်တော့ .ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုသူတတ်တဲ့ဂီတပညာတွေသင်ပေးမိတယ် ဒီလိုနဲ့ ပါရီမီရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့သူ ဂီတပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက် ကျောင်းမှာကြိုးစားလေကျင်ရင်း ပြင်ဆင်ကြတယ်....ဒီကားကိုကြည့်မိတော့ ခေါင်းဆောင်မင်းသား (Jack black)က ဂစ်တာတီးဟန် သီချင်းဆိုဟန်တွေကိုသတိထားမိတယ် .....ပြီးတော့ ကလေးတွေ ဒရမ်သမား ဂစ်တာသမား ဟာမိုနီသမားကောင်မလေးတွေ..ကီးဘုတ်တီးတဲ့သူ ....အားလုံးဟာ အပြင်မှာတကယ်တီးနေ ဆိုနေတာကိုရိုက်ထားသလားမှတ်နေရတယ်...ဒါကြောင့် school of rockဇာတ်ကားအကြောင်းနည်းနည်းစုံစမ်းကြည့်တော့ သရုပ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးက အခုလက်ရှိအပြင်မှာလည်း Band တွေမှာနာမည်ရနေတဲ့လူငယ်လေးတွေပါတဲ့..ပြီးတော့the school of rockထဲကမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အပြင်မှာ အတီးအဆိုနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်မင်းသား Jack Black ကအပြင်မှာလည်း ဂစ်တာစကေးကြီးဗျ...ကိုင်း ဇာတ်လမ်းလန်းလန်းလေးနဲ့မြူးမြူးကြွကြွသချင်းလေးတွေခံစားချင်ရင်တော့.....IMDbကလည်း 7.1ဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်..... File Size…(885MB) and (355MB) Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…01:48:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…..Phyo Pyae Subtitle by ...Honest Abe
How to LoseaGuy in 10 Days (2003) အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ 2003 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ How to loseaGuy in 10 days ဆိုတဲ့ကားပါဒါကတော့Romance/Comedy အမျိုးအစားလေးပါဒီထဲမှာတော့ ဘန်ဂျမင်ဘယ်ရီဆိုတဲ့ ကြော်ငြာတာဝန်ခံတစ်ယောက်ဟာ စီမံကိန်းအကြီးကြီးတစ်ခုကို ရဖို့အတွက် အလောင်းအစားတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင် ဘန်ဂျမင်ဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို 10 ရက်အတွင်း သူ့ကိုကြွေဆင်းလာစေရမယ်လို့ လောင်းကြေးထပ်လိုက်တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မဂ္ဂဇင်းမှာ 10 ရက်အတွင်း ယောက်ျားတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုထားခဲ့ချင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကို ရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းလိုက်ရှာမယ့် အန်ဒီ အန်ဒါဆန်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်သူဟာစမ်းသပ်ဖို့အတွက် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်အလောင်းအစားလုပ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ သူတို့ နှစ်ယောက် ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်း ဘယ်သူကအောင်မြင်သွားမလဲဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို ဟာသလေးတွေနှောပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရိုက်ကူးထားတာပါcomedy ချစ်ပရိသတ်တွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါလို့ ညွှန်းပေးပါရစေ File Size ...
My Tutor Friend (2003) 2003 မှာထှကျရှိခဲ့တဲ့ ဒီဇာတျလမျးလေးက နာမညျကြျော မငျးသား Kwon Sangwoo နဲ့ နာမညျကွီး အခြောအလှ ထိပျခေါငျ မငျးသမီး Kim Haneul တို့မှ အဓိက ပါဝငျထားပွီး CJ Entertainment ရဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးတှေ ထဲက တဈကားဖွဈပါတယျComedy ရဲ့ အရသာ အပွညျ့အဝပါဝငျတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာ တောငျကိုရီးယားရဲ့ တဈခတျေတဈခါမှာ အောငျမွငျမှုပေါငျးမြားစှာ သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တာ အတျောအမြား သိကွမှာပါ (မသိသေးရငျ အခုပဲ ကွညျ့လိုကျပါ)အထကျတနျးကြောငျးမှ အလုပျပွုတျလာတဲ့ ဆရာမလေး ခြှဲဆူဝမျဟာ မိခငျရဲ့ စညှေနျးခကျြအရ မိခငျဖွဈသူဧ။ျခမျြးသာသော သူငယျခငျြးရဲ့ သားကို ဂိုကျလုပျပေးဖို့ ဖွဈလာပါတယျဂဈြကနျကနျ အပအေတေ နှဈကြ ပွသာနာအိုး ကြောငျးသားနဲ့ ဆတျဆတျထိမခံ ငါဟဲ့ ဆရာမ ဆိုတဲ့ မာနျအပွညျ့နဲ့ ကြူရှငျဆရာမတို့ ဆုံစညျးကွတဲ့အခါမှာ ဘယျလို ကတောကျကဆတှေ ဘယျလိုအလှဲလေးတှေ ...